Ifulethi elitsha elinephuli ePraia da Maranduba
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRomero Imobiliária Ubatuba
Iflethi entsha kraca kulwandle lwaseMaranduba, esandula ukuziswa yinkampani yokwakha, enebalcony emnandi, iqula lokuqubha, indawo yokupaka egqunyiweyo, indawo yokuhlala etofotofo ukuya kuthi ga kwi-7 yabantu kwaye imi kumgama nje oyi-500m ukusuka elwandle.
Sukuchitha ixesha uze nawe kule paradesi!!!
*Intuthuzelo kunye noxolo kwiimitha ezimbalwa ukusuka elwandle.
Indawo epholileyo nemnandi kakhulu enedama lokuqubha elikhanyisiweyo, elinokusetyenziswa imini okanye ubusuku, iibhedi ezintsha kunye noomatrasi, i-Wi-Fi, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, umoya omhle kakhulu kunye nokukhanya kwendalo.
Indawo ekufikeleleka lula elunxwemeni, iivenkile zokutyela, iivenkile, iibhari, izikhululo zegesi, iivenkile ezinkulu nokunye.
Zonke iintlobo zokuhanjiswa zihanjiswa kwindawo.
ibhedi elala umntu omnye eyi-1, isofa ekwayibhedi eyi-1, ibhedi ekhwele kwenye eyi-1
Ulwandle lwaseMaranduba lunxweme oluzolileyo olunobude obude besanti, lulungele abantwana, kunye neentlobo ngeentlobo zeekhiski. Ibekwe kakuhle kakhulu kwaye inemozulu entle kakhulu, inesiseko esipheleleyo seebha, iivenkile zokutyela, iivenkile, iikhemesti, izikhululo zegesi, iivenkile ezinkulu, kunye namanzi azolileyo unyaka wonke.
Umbuki zindwendwe ngu- Romero Imobiliária Ubatuba
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Maranduba